Updated / Sunday, 26 Aug 2018 12:16
Emmerson Mnangagwa took the oath before Chief Justice Luke Malaba
Emmerson Mnangagwa has been officially sworn in as president of Zimbabwe after winning a bitterly contested election that marked the country's first vote since Robert Mugabe was ousted from power.
Mr Mnangagwa, whose victory in the 30 July polls was challenged by the main opposition, pledged to "protect and promote the rights of Zimbabweans" in an inauguration ceremony attended by a crowd of thousands at a stadium in Harare.
"I Emmerson Dambudzo Mnangagwa swear that as president of the republic of Zimbabwe I will be faithful to Zimbabwe (and) will obey uphold and defend the constitution of Zimbabwe," he said.
Once Mr Mugabe's right-hand man, Mr Mnangagwa of the ruling ZANU-PF party won the election with 50.8% of the vote - just enough to meet the 50% threshold needed to avoid a run-off against the main opposition led by Nelson Chamisa, who scored 44%.
Zimbabwe's top court on Friday dismissed Mr Chamisa's bid to have the results annulled because of allegations of vote rigging.
Mr Mnangagwa took the oath before Chief Justice Luke Malaba who, together with eight other Constitutional Court judges had dismissed Mr Chamisa's petition.
The election was touted as a crucial step towards shedding the pariah reputation Zimbabwe gained under Robert Mugabe, and securing international donor funding to revive a crippled economy.
Nelson Chamisa's bid to have the results annulled because of vote rigging were dismissed
But hours before Mr Mnangagwa's inauguration, the International Republican Institute and National Democratic Institute said the country lacked a "tolerant democratic culture" in which political parties were treated equally and citizens allowed vote freely.
The US observers also urged "all sides to rely on peaceful expression and to avoid acts or threats of retribution against political rivals following the Constitutional Court's decision."